मानव इतिहासकै सबैभन्दा धनी मानिस को थिए ? - Onlinesamaya.com
मानव इतिहासकै सबैभन्दा धनी मानिस को थिए ?
फागुन २७, काठमाडौं । हामीलाई मानव इतिहासकै एकजना सबैभन्दा धनी मानिसको बारेमा सायद थाहा नै छैन । हो, अहिलेका सर्वाधिक धनी मानिस जेफ बेजोज भन्दा ३ गुणा धेरै सम्पत्ति भएका एक मानिस पनि यो धर्तीमा थिए । इतिहासकारहरुले ती व्यक्तिलाई मानव इतिहासमै सबैभन्दा धनी व्यक्ति मान्छन् ।
सन् १२८० देखि १३३७ सम्म माली देशको राजा रहेका मनसा मुसा प्रथम मानव इतिहासकै सबैभन्दा धनी मानिस हुन् । ती बादशाह सुन, चाँदी तथा हीराजस्ता धेरै बहुमूल्य खनिज पदार्थ तथा खानीहरुको मालिक थिए । उनको सम्पत्ति कति थियो, उनी आफैंलाई थाहा थिएन भनिन्छ । उनको त्यतिबेलाको राज्यको केन्द्र माली भएपछि त्यो राज्य हालका अफ्रिकाका धेरै देशहरुसम्म फैलिएको थियो ।
त्यस समय विश्वभर नै सुनको माग अत्यन्तै उच्च थियो । जसका कारण उनले आफ्नो राज्यमा भएको सुनको बिक्रीबाट विशाल धनसम्पत्ति जोड्न सफल भए ।
वास्तवमा उनीसँग त्यसबेला रहेको धन सम्पत्तिको हिसाब आजको मूल्यमा गर्नु निकै कठीन हुन्छ । तथापि, इतिहासकार तथा अर्थविदहरुले उनको त्यस बेलाको सम्पत्तिलाई अहिलेको मूल्यमा गणना गरेका छन् । जस अनुसार ती बादशाहको सम्पत्ति अहिलेको मूल्यमा कूल ४ खर्ब अमेरिकी डलरको रहेछ ।
जेफ बेजोसलाई विश्वमा १ खर्ब डलर भन्दा बढि सम्पत्ति हुने विश्वकै पहिलो र एकमात्र व्यक्ति मानिन्छ । तर वादशाह मुसाको सम्पत्ति बेजोसको भन्दा झण्डै ४ गुणा बढि रहेछ ।